स्वास्थ्य Archives - All Nepal
जटीबुटीको प्रयोग द्वारा आयुर्वेदिक अस्पतालमा अब थप यस्ता प्राकृतिक उपचार सुरु, जानकारी लिनुहोस …
बच्चामा ब्रेन ट्युमर के हो ? चिकित्सा विज्ञानले अहिलेसम्म यसको ठ्याक्कै उत्तर खोज्न सकेको छैन । हालै भएको एउटा अनुसन्धानले बच्चाको कान नजिकैको मस्तिष्कमा क्यान्सरयुक्त ट्युमरको समस्या बढिरहेको छ । उक्त अनुसन्धानले अत्यधिक मोबाइल प्रयोगका कारण यस्तो समस्या देखिएको बताएको छ । चेन्नईका अपोलो प्रोटोन सेन्टरका चिकित्सक डा. राकेश जलालीले गरेको अनुसन्धानमा यस्तो देखिएको हो […]
जन्डिस आफैँमा रोग होइन, बरु एउटा गहिरो रोगको लक्षण हो । जन्डिस भएपछि कलेजो विग्रने र भाइरल हेपटाइटिस हुने गर्छ जसको उपचार निकै कठिन मानिन्छ । मलेरिया, हेपटाइटिस ए लगायतका रोगका कारण पनि जन्डिस हुने गर्छ । प्रारम्भिक रुपमा पहिचान गर्न सकेमा कतिपय अवस्थामा जन्डिसलाई घरमै उपचार गर्न सकिन्छ । जन्डिस उपचारका केही प्रमाणित घरेलु […]